Nezvedu - Fujian Foen Aluminium Co, Ltd.
Fujian Foen Aluminium co., Ltd yakagadzwa muna 1988, iri muFuzhou guta reChina, inovhara nzvimbo yemamirimita 1,333,000 emamirimita nevashandi vanopfuura 3500. 20% yavo inyanzvi kana mainjiniya. Isu tiri nyanzvi yekugadzira muChina kugadzira iyo aluminium profiles, aluminium machining, aluminium hwindo uye musuwo system, chidzitiro cheketeni uye solar bracket.
Isu tiri dzimba 5 billet yekukanda chiraira, 1 mold centre, 70 yekuwedzera mitsara, 4 anodized mitsara, 11 vertical poda inomarara mitsetse, 1 yakatarwa poda yekubatira mitsara, 1 huni yakavezwa mutsara uye 2 inopisa kuputsa kugadzira mitsara; izvo zvinoita kuti redu rekubuda pagore risvike zviuru mazana mana ematani.
Isu tinopawo iyo CNC yekugadzirisa uye michina yeiyo aluminium profiles, inosanganisira chaiyo yekucheka, chigayo, punch, kuchera, kopi router, kukotama, weld, nezvimwewo Mazhinji emachina ekuuchinjisa anotengeswa kubva kuGermany, Denmark;
Isu takavimbika kuunza matarenda epamusoro uye tine nyanzvi yekugona timu mukugadzira, tekinoroji, manejimendi uye mashandiro. Kubudikidza nemakore 'kuedza, isu takapfuura ISO 9001, ISO 14001 uye OHSAS 18001 manejimendi system, yakapihwa zita reMukurumbira Brand uye rakweretwa bhizinesi reChina.
Isu takatsaurirwa pakutsvaga kugona kukuru pane iyo musimboti we'Mhando yepamusoro, Vatengi kumberi, Service pamberi uye Chikwereti kumberi '. Isu tinofanirwa kuvaka bhizinesi rekutanga-nyowani uye inozivikanwa zita rechinzvimbo chepamusoro-giredhi uye yakakwirira mhando.
Foen yekuratidzira imba inoratidza yakawanda majuru ezvakagadzirwa zvakagadziriswa kuti zvisvike zvinodiwa nevatengi munzvimbo dzakasiyana dzenzvimbo uye yekushongedza masitay. isu tiri Tarisa pane yakakwirira-kuguma kuchengetedza masuo uye Windows. Inoshongedzwa nehungwaru yekuvhara basa rekuchengetedza zvakanyanya. Iine simba rakasimba rekuita, tekinoroji yepamusoro uye yakarongedzwa, suite yakazara yezvigadzirwa, inosanganisira Bi-fold mikova nemahwindo, Stacking uye Sliding magonhi nemahwindo, Aluminium hinged masuo, Awning uye Casement windows, Aluminium neGirazi Louvres, Pool fenzi, etc.